LG malitere inye ihe ngosi banyere LG G6 ohuru na vidiyo | Akụkọ akụrụngwa
LG malitere inye ihe ngosi banyere LG G6 ohuru na vidiyo
Ọ bụ ezie na anyị agaghị izute LG G6 Ruo mgbe Febụwarị na-esote, ikekwe na ihe omume nke ga-eme n'ime usoro nke Mobile World Congress ga-eme na Barcelona, ​​LG amalitela ikpo ọkụ ikuku nke ihe ngosi ahụ, yana vidiyo nke ọ dịkarịa ala ịchọ ịmata ihe na na ị pụrụ ịhụ n'isi ke ibuotikọ emi.
Niile Ndepụta ndepụta maka ezigbo ekwentị”, Ọtụtụ ọrụ na-enye ha okwuntughe ịchọta ezigbo ekwentị. Nnukwu ihuenyo, obere ahụ, nke na-enweghị mmiri ma ọ bụ ihe a pụrụ ịdabere na ya bụ ụfọdụ njirimara ndị ọrụ chọrọ na ekwentị dị mma. Na nkọwa nke video anyị na-ahụ a ozi na-ekwu; “Ọchịchọ gị ịchọrọ maka ekwentị kacha mma ga-emezu. Nọrọ na nche maka mbata ha na February 2017 ”.
Enweghị ọtụtụ obi abụọ na njirimara ndị a niile na-ezo aka na LG G6 ọhụrụ, nke ahụ abụghị naanị LG bipụtara site na ọwa YouTube ya, kamakwa na njedebe ya, okwu ahụ pụtara. "Febụwarị 2017" na-ezo aka ụbọchị nke ngosi nke ọhụrụ flagship. Na nke a, anyị ga-agbakwunye nkọwa nke anyị kwurula.
Na ihe a niile ọ dị ka LG G6 ga-abụ ngwaọrụ mkpanaka nwere nnukwu ihuenyo, na-enweghị ọtụtụ okpokolo agba, mmiri na-enweghị oke yana ezigbo aka nke atụmatụ ndị ọzọ akpọrọ ka LG ọhụrụ flagship mara mma. Ihe ọzọ dị iche ga - emezu ya na nnukwu asọmpi dị ugbu a na ahịa ekwentị.
Kedu ihe ị ga-achọ ịhụ na LG G6 na-esote?. Gwa anyi na oghere edebere maka ikwu okwu na post a ma obu site na otu netwọkụ ndi anyi nọ n’ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » LG malitere inye ihe ngosi banyere LG G6 ohuru na vidiyo
Enwere ike dijo
Ezi igwefoto, submersible na obodo kwụụrụ m ka m nwere olile anya.
Samsung ga-amalite mpempe akwụkwọ mpịachi agba na nkeji nke atọ nke afọ a